Hazakazaka arahin-tosika sy asa… | NewsMada
Hazakazaka arahin-tosika sy asa…
Mihazakazaka ny toe-draharaham-pirenena amin’izao fametrahana amin’ny toerany ny filohan’ny Repoblika vaovao izao. Hijoro ny governemanta vaovao, hirosoana ny fandaharanasa vaovao, ny fomba fiasa vaovao… Handeha amin’ny fanavaozana tanteraka ny raharaha? Na fiovana sy fanovana… Arahaba soa, arahaba tsara.
Mby ao an-tsaina amin’izao toe-draharaham-pirenena izao ny hoe: hazakazaka arahin-tosika. Saika famotrahana na faminganana mandrakariva no tsaroana amin’izay. Ny efa mihazakaza no atosika, lavo no hiafarany. Nefa eo koa ny hoe: mila tanana, mila tosika… Avela hihazakazaka irery ve ny mpitondra fa hoe efa nomena fahefana?
Tsy vita tamin’ny fandatsaham-bato ny ady sy ny adidin’ny olom-pirenena; eny, na eo aza ny tamberin’andraikitra takina sy andrasana amin’ny mpitondra. Mila tanana sy mila tosika avy amin’ny tsirairay sy ny rehetra ny mpitondra. Ny taotrano tsy efan’ny irery, vao mainka izay fanarenana sy fanorenana ary fanonerana izay tsy efa hatramin’izay?
Eny, na ny hoe mpanohitra aza, manana ny toerany sy anjarany amin’izany: hanana fahasahiana hijery, hamantatra, hanadihady, hiteny, hanitsy… Iombonana sy iaraha-manana ny firenena, fa tsy misy tompony irery na hoe tsy hiraharaha. Ilaina ary takina amin’izany ny teny tsy misorona, ny tsy fijerena arina an-tava, ny hevitra tera-bary…
Raha hapetraka amin’ny toerany ny mpitondra, mila maka izay tandrify azy koa ny tsirairay: iza no manao inona? Mba tsy hisy ny fifampiandrasana, fanilihana andraikitra, fitsikerana ranofotsiny, fanomezan-tsiny… Mihazakazaka ny raharaha? Mba tsy arahin-tosika hamotraka na hamingana àry, fa hanome tanana na hanohantohan-tsy ho lavo.
Izany rehetra izany, arakaraka ny ataon’ny tena ihany no mahasoa na maharatsy. “Atombohy amin’ny fiovana eo aminao izay tianao hiova amin’ny manodidina anao”, hoy ny filoha indianina teo aloha iray izay, i Gandhi. Sao mampanara-tosika ny hazakazaka, nefa tsy hanohana fa hamotraka? Alao hery àry ny hazakazaka arahin’asa…